By Step Asha | April 29, 2019
Ecoslim ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ခြင်း အသုံးပြုနည်း အကြိုးကြေးဇူးမြား ဆေးတခါသောကျ
တစ်လအတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ကီလိုဂရမ်ကနေ ၁၅ ကီလိုဂရမ်အထိကျနိုင်တယ်
အဝလွန်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေက ဟော်မုန်းမမျှတတာ၊ အထိုင်များတဲ့ နေစဉ်နေထိုင်မှုပုံစံရှိနေတာနဲ့ ဂေဟစနစ်အားနည်းမှုတွေကြောင့်လို့ပြောကြပေမယ့် ဒီအချက်တွေက အဝလွန်မှုနဲ့တိုက်ရိုက် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ အချက်တွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။
အဝလွန်ရခြင်းရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က သဘာဝကနေရတာမဟုတ်တဲ့ အစားအစာအာဟာရတွေကို စားသုံးမှုက ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထက်ပိုရစေခြင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေတာပါ။
စတိုးဆိုင်တွေမှာအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့ အစားအစာတွေမှာပါတဲ့ တာရှည်ခံဆေးတွေ၊ သဘာဝမဟုတ်ဘဲ ဖန်တီးထားတဲ့ အရသာတွေနဲ့ ဆိုးဆေးတွေက လိုမျိုးဓာတုပစ္စည်းတွေက အစာမကြေဖြစ်စေပြီး ကိုယ်တွင်းမှာ အဆီတွေစုတာနဲ့ မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကို အစာခြေစနစ်ကချေဖျက်ရတာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်ပါတယ် အထောက်အကူပြုပေးမယ့်အရာတစ်ခုခု။ Ecoslim ကိုဘေးထှကျသကျရောကျမှု ရဲ့လုပ်ဆောင်ပုံ
အာဟာရဗေဒဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ အသစိအမှတ်ပြုထောက်ခံမှု
ဆူဆေးပြားလေးကို ရေမှာပျော်ဝင်အောင်လုပ်လို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သန့်စင်အောင်လုပ်ခွင့်ပြုပါ Ecoslim အစားတစ်ခုခုစားနေရင်းဖြစ်ဖြစ်၊ စားပြီးချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် ဆူဆေးပြားကိုရေတစ်ဖန်ခွက်စာဖျော်လို့သောက်ပေးပါ။ သိပ်မကြာခင်မှာ ထူးခြားမှုကိုတွေ့ရမှာပါ။ တစ်ပတ်အတွင်းမှာ အစာအိမ်ပြဿနာတွေနဲ့ အစာမကြေတဲ့ပြဿနာတွေကင်းဝေးလို့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဆူဆေးမှာပါတဲ့ အရာတွေကို အာဟာရကွပ်ကဲရေးဌာနက အခြားဓာတုဒြပ်ပေါင်းတွေထက် ဘေးကင်းစိတ်ချရပြီး သိသိသာသာကိုယ်အလေးချိန်ကျစေတဲ့ သောက်စရာတစ်ခုအနေနဲ့ အတည်ပြုထားတာပါ။တော်ရင်း၊ကဖင်းနဲ့ ဂူအာနာတို့ပါဝင်ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် အခြား ဓာတုဒြပ်ပေါင်းတွေကို အခြေခံထုတ်ထားတဲ့အရာတွေထက်စိတ်ချရပါတယ်။ နေ့ရက်တိုင်းမှာ ပြဿနာတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က အဆီပိုတွေကိုဖယ်ရှာားပေးတာကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ချချင်သူတွေအတွက် မှန်ကန်တဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုပါ။
သေချာစိစစ်ရွေးချယ်ထားသော သောက်စရာ အမြင့်ဆုံးသောအောင်မြင်မှုကိုရစေဖို့
ဗီတာမင်ချို့တဲ့မှုက ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထက်တိုးစေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းဖြစ်လာနေ
ဒီအပင်တွေက အဆီတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်စွမ်းမရှိလောက်ဘူးလို့ ထင်ရင်ထင်ကြမယ် သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုရလဒ်တွေကတော့ အခုလိုပြောပါတယ်
သင့်ရဲ့ အနာဂတ် ရလဒ်
. Ecoslim ရေဆူဆေးပြားလေးတွေနဲ့ပဲ တစ်နေ့တစ်ခြားသင့်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်။
တစ်ရက်ကို ၀ ကီလိုဂရမ်ကနေ ၅ ကီလိုဂရမ်အထိကျဆင်းစေနိုင်မှာပါ
တစ်ပတ်ကို ၃ ကီလိုဂရမ်ကနေ ၅ ကီလိုဂရမ်အထိကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်
တစ်လကို ၁၀ ကီလိုဂရမ်ကနေ ၁၂ ကီလိုဂရမ်ထိကျစေနိုင်တယ်
တုံ့ပြန်ချက် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စားသုံးသူတွေထံမှ။ Ecoslim ပွနျလညျဆနျးစဈခကျြ
ငယ်ငယ်ကတည်းကဝတာဖြစ်ပြီး တစ်လအတွ်း ကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားတက အံ့အားသင့်စရာပါပဲ။ Ecoslim ကြောင့် အရမ်းပျော်ရွှင်ရပါတယ် စားချင်စိတ်နည်းသွားပြီး ဗိုက်ပြည့်နေသလိုခံစားရစေမှုက ပထမအဆင့်အနေနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၃ ကီလိုဂရမ် ကျသွားစေပါတယ်။ ပထမတော့ ကိုယ်အလေးချိန်က ဖြည်းဖြည်းချင်းကျလာတာပါ။ နောက်တော့ တစ်နေပကို ၁ ကီလိုဂရမ်ပုံမှန်ကျလာခဲ့ပါတယ်။
အသက် 58 နှစ်
အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် ကျွန်တော် ဝိတ်ချဖြစ်တာက ကျွန်တော့ သမီးလေးကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော်က ဝတော့ သူနဲ့ ပြေးလွှားမဆော့နိုင်ဘူးလေ။ သမီးလေးနဲ့ဆော့ဖို့တကယ့်ကိုခက်ခဲခဲ့တာပါ။ ခါးတောင်ကိုင်းမရအောင်ကို ဝခဲ့တာလေ။ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ကီလိုဂရမ်လောက်ကျသွားပြီးချိန်မှာ Gym ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန် စဆော့တော့တာပါပဲ။ EcoSlim ကတကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ အရာတစ်ခုပါ ပိတ်ရက်တွေမှာအစားအများကြီးစားမိတဲ့အခါမျိုးဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့မေ့သွားရင်ဖြစ်ဖြစ် EcoSlim ကိုသောက်နေဆဲပါ
အသက် 32 နှစ်
Ecoslim ဆေးတိုကျ စွေး အဘယျမှာဝယျပါရနျ
၆ လအတွင်း ၃၆ ကီလို ဘယ်လိုချမလဲ။ Ecoslim ဖိုရမျ တကယ့်ရလဒ်အစစ်
စသောက်ကာစလူတွေအတွက် ၃ ပတ်လောက်အတွင်း အဆီကျပါမယ်။ ဒီနည်းကိုသုံးဖိုမဆုံးဖြတ်ခင်ကအင်တာနက်မှာရှာခဲ့သေးတယ်။ “ကီလို ၄၀ ကျရမယ်” ဆိုတဲ့ ဒီဂရုမှာ အဖွဲ့ဝင်ခဲ့တာပေါ့။ ဒီဂရုမှာပဲ အဆီကျသွားတဲ့သူတွေအကြောင်း၊ သူတို့ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့လဲ၊ ဘာနည်းလမ်းတွေသုံးခဲ့လဲဆိုတာ ကျွန်မဖတ်ခဲ့ပြီးပြီ။ အဲဒီနောက် သူတို့ရဲရလဒ်ကို ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားတယ်။အဲဒီမှာဓာတ်ပုံတွေမှအများကြီး။ပြောရင်တောင် ယုံမှာမဟုတ်ဘူး၊လပ်တော့ကွန်ပျူတာရှေ့ ၃နာရီလောက် ကောင်းကောင်းအချိ်န်ကုန်နေခဲ့တာ၊ အချက်အလက်တွေအကုန်လိုက်ဖတ်ရင်း မုန့်တွေစား၊ ကော်ဖီနှစ်ခွက်လောက်နဲ့ ဒိန်ချဉ်တစ်ခွက်ဝင်သွားတယ်။ အကုန်ဖတ်ပြီးတာတောင် အစားမလျှော့ဘဲဘယ်လိုမြန်မြန်အဆီကျမလဲဆိုတာ ထောက်ပြနိုင်တဲ့အချက်ရှာမရခဲ့ဘူး။ တချို့က သခွားသီးနဲ့ ဂျုံကြမ်းတွေစားပြီးဝိတ်ချတယ်။ တချို့က ပန်းသီးပဲစားပြီး ဝိတ်ချတယ်။ တချို့ကျတော့ ၆လလောက် အရမ်းပင်ပန်းခံပြီး ဝိတ်ချတာတောင် ၅ ကီလိုပဲကျတယ်။ ကျွန်မလိုချင်တဲ့ရလဒ်က ၂ လအတွင်း ၁၀-၁၂ ကီလိုကျဖို့ပဲ။
ဒါ့ကြောင့် ဇွန်လ ၁ ရက် ကိုယ်အလေးချိန် ၈၃ ကီလိုဂရမ်၊ အရပ် ၁၇၅ စင်တီမီတာ
တစ်ပတ်လုံး ဂျုံကြမ်းနဲ့ကြက်ရင်အုံသားစားပြီး အစားလျှော့ဖို့ စိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်။ ဖတ်ထားသမျှထဲမှာ တွေ့လာခဲ့တာက ဒီစားနည်းက အဆီကျတယ်ဆိုလို့လေ။ စိတ်မကောင်းစရာက ၂ ရက်ပဲ အောင့်နိုင်တဲ့ ကိုယ့်အစွမ်းပေါ့။ အရသာမရှိ၊ ဘာမှမပါတဲ့ စားစရာလေ။ ကမ္ဘာမှာရှိသမျှစားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေပဲ အမြဲတနေတော့တာ။ ဒီဟာတွေနဲ့တော့ တစ်ပတ်ပြည့်အောင် တောင့်ခံနိုင်မယ်မထင်တော့ဘူး။ တခြားနည်းရှာဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။
တစ်ခုခုတော့လုပ်ရမယ်။ ၂ ပေါင်ထပ်တက်လာမယ်လို့ မသိခဲ့ပါဘူး။ တော်တော်ဆိုးဝါးတဲ့အဖြစ်ပါ။ ပန်းသီး၊ကွေကာနဲ့ ကြက်ဥပြုတ်ပြောင်းစားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်မရဲ့မနက်စာက ငှက်ပျောသီးနဲ့ကွေကာပဲပါပါတယ်။ အရွက်သုပ်နဲ့ကြက်ဥပြုတ်က နေ့လယ်စာ။ ကျွန်မ ကြက်ဥပြုတ်ကိုလည်းမုန်းလာတယ်။
ဇွန်လ ၆ ရက် :
၃ ရက်ကြာတော့ အသားအရေနဲ့ ဆံပင်တွေ စပြီးခြောက်သွေ့လာတယ်။ သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။ စိတ်တွေလည်းတိုတတ်လာတယ်။ တစ်ခုမှလည်းစားချင်စရာမရှိဘူး။ ဒီထက်ဆိုးတာက ကြက်ဥပြုတ်မှာ ကိုလက်စထရောတွေများလို့ ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းဘူးလို့ တွေ့လိုက်ရတာပဲ။ ဒါဆို လူတွေက ဘာလို့ ဒီလောက်များများစားနေကြတာလဲ။
ဇွန်လ ၈ ရက်
မမျှော်လင့်တာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူ့လက်ထပ်ပွဲလာဖိတ်တယ်။ ပွဲရက်က တစ်လပဲလိုတော့တယ်။ ကျွန်မဝိတ်က ၈၅ ကီလိုပြန်ဖြစ်နေပြီ။ လူကဝပြီး ရုပ်ဆိုးနေပြီ။ တစ်ခုခုတော့ အမြန်လုပ်မှဖြစ်တော့မယ်။
ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုမှာ ရက်အတော်ကြာရှာလိုက်ရပြီးနောက် သိလာတာက ကျွန်မဟာ အစားလျှော့အစီအစဉ်တွေနဲ့ အဆင်မပြေဘူးဆိုတာပဲ။ အင်တာနက်မှာရေးထားတာတွေက အဆီကျတယ်ဆိုတာ သူ့နေရာနဲ့သူအချိုးအစားပြန်ကျသွားလိမ့်မယ်တဲ့။ ဝိတ်က၁၂ကီလိုကျချင်တာ ဒါပေမယ့် မနက်၉နာရီကနေ ည ၈နာရီအထိ အလုပ်ဆင်းရတော့ ဘာအဆီကျသင်တန်းမှမတက်ရ။ အဲဒီတုန်းက ဖိတ်စာကို ငြင်းလိုက်ချင်တာ။ ဒါပေမယ့်သတို့သမီးလောင်းက ကျွန်မ မလာလို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်း အတင်းကိုဖုန်းဆက်ပြောတော့တာ။ တကယ်တော့ သူ့ကို စိတ်ပျက်သွားအောင် မပြောရက်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်မရဲ့ပူပန်စိတ်တွေကို ဖျောက်ပြီး သူကျေနပ်အောင်လိုက်လျောခဲ့တယ်။
သူက အမြဲပြည့်ပြည့်လေးရှိခဲ့တဲ့သူ။ ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာခင်က ပိန်သွယ်သွားခဲ့တာ။ ကျွန်မဘာကိုစိုးရိမ်နေလဲသူသိသွားတော့ သူအဆီကျအောင် ဘယ်အရာကကူညီပေးခဲ့လဲဆိုတာ ပြောပြတယ်။ အဲဒါက EcoSlim ပဲ။ တကယ်ကောင်းပါ့မလားလို့သံသယရှိခဲ့ပေမယ့် စမ်းလည်းစမ်းကြည့်ချင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းရဲ့ပုံစံကတော့ တစ်နှစ်အတွင်း လုံးဝပြောင်းလဲသွားတာကိုး။ သူ့ရဲ့လက်ထပ်ပွဲရက်က ဇူလိုင် ၂ ရက်ဆိုတော့ ကျွန်မအတွက် ဝတ်စုံနဲ့တော်အောင်၊ လှအောင်ဝိတ်ချပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်သုံးပတ်ပဲရတယ်။ သူပြောပြတဲ့ရက်မှာပဲ အင်တာနက်ကနေ ဝဘ်ဆိုက်ကတဆင့် EcoSlim ကိုမှာလိုက်တယ်။ ဆရာဝန်ဆေးညွှန်းလည်းမလို၊ ဆေးဆိုင်လည်းသွားစရာမလိုဘဲနဲ့ပေါ့။ ဒီလင့်ကနေ ကျွန်မကိုယ်တိုင် မှာခဲ့တာ .
ဇွန်လ ၁၂ ရက် :
EcoSlim တစ်ဘူး နောက်ရက်မှာရောက်လာတယ်။ အဲဒီဘူးကို ရုံးယူသွားပြီး ဘယ်သူမှမသိခင် ဖောက်လိုက်တယ်။ အထဲမှာ အညွှန်းပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးက သဘာဝပစ္စည်းတွေချည်းမို့ ဘာကန့်သတ်ချက်မှမပါပါဘူး။ တကယ်တော့ ကျွန်မအတွက်ကလည်း ရလဒ်ပဲအရေးကြီးတာဆိုတော့ ဒါတွေဘာမှအရေးမပါဘူး။ သူကဘေးလည်းကင်းတယ်ဆိုတာသိရတော့ အဲဒီနေ့ပဲ စသောက်ပလိုက်တယ်။
အညွှန်းအတိုင်းသောက်တော့ EcoSlim. ကြောင့် ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုပိုကောင်းစေပြီး အဆီချေဖျက်မှုမြှင့်တင်ပေးတယ် အဆီပိုတွေကိုဖယ်ရှား၊ ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုမြှင့်တင်ပေးလို့ အဆီကျစေတာကိုတော့ကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်က ဆက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပြီ ဆက်လုပ်ကြစို့။
သိလား ၅ ရက်ပဲရှိသေးတယ်။ ကျွန်မ ၃ကီလိုခွဲ ကျသွားပြီ။ ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ ကျွန်မ EcoSlim သောက်ခဲ့တဲ့အချိန်အတွင်း အစားပုံမှန်ဆက်စားတယ်။ ဝန်ခံရရင် စားချင်စိတ်လျော့သွားလို့ အစားတော့နည်းသွားတယ်။ ညနေဘက် တီဗီကြည့်ရင်း ကျွန်မလေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်းလုပ်တယ်။ ပုံမှန်လုပ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။
ဇွန် ၂၅ ရက် :
၆ ကီလို ထပ်ကျတယ်။ စုစုပေါင်း ၁၀ ကီလိုနီးပါးကျတယ်။ ကျွန်မပိန်လာတာကို တော်တော်များများသတိထားမိလာပြီး အကောင်းမြင်မှတ်ချက်တွေပေးလာကြတယ်။ အဲဒီကစပြီး မေးနှစ်ထပ်နဲ့ ဝတုတ်မလေးက အလန်းဆုံးလေးလို စိတ်တွေစဝင်လာတယ်။ ကျန်းမာရေးလည်း ပိုကောင်းလာတယ်။ အိပ်လို့ကောင်းတယ်၊ စိတ်အပြောင်းအလဲလည်းမမြန်တော့ဘူး။ အားပိုပြည့်ပြီး ပျော်ရွှင်လာတယ်။
ဇူလိုင် ၂ ရက် ။ ကိုယ်အလေးချိန် ၆၈ ကီလို၊ အရပ် ၁၇၅ စင်တီမီတာ။
ဒီနေ့ကို နှစ်ပတ်လည်နေ့လို့ အောင်ပွဲခံရအောင် ၁၅ ကီလို ကျတယ်။ ကျွန်မဖြစ်ချင်ခဲ့တာထက်တောင် သာနေသေးတယ်။ ရလဒ်ကို ကျွန်မဘယ်လောက်ကျေနပ်အားရလဲဆိုတာ ပြောဖို့စကားလုံးတောင်မရှိဘူး။ မှန်ထဲမှာ ကိုယ့်ပုံကိုယ်ကြည့်ရင်း အရမ်းကိုစိတ်ချမ်းသာတာပဲ။ အခုဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပိုချစ်လာပြီ။
မှတ်ချက် ၂၂ ခု
ဝိုး..မိုက်လိုက်တာ။ အခုလုံးဝပုံစံပြောင်းသွားတာနော်။ အားကျလိုက်တာ။
ဟယ်လို ရတနာ။ အရမ်းကြည့်ကောင်းတာပဲ။ ညစာဘာနဲ့စားလဲဟင်။ နေ့တိုင်း ဘာတွေဘယ်လိုစားတာလဲပြောပြပါလား။ ညနေ ၆ နာရီကျော်ရင် ဘာမှမစားဖို့ လိုလား။
ကေရေ။ အရင်ဆုံး အစားအသောက်ကိုတွေးပူမနေနဲ့တော့။ ကျွန်မတော့ စားချင်စိတ်ပေါ်လာရင် စားပစ်လိုက်တာပဲ။ ည ၉ နာရီတောင် စားရင်စားနေသေး။ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းချင်း ခွဲစားတာပေါ့။ ခန္ဓာကိုယ်ကပြည့်ပြီဆို ထပ်မစားတော့ဘူး။
ဒီဘလော့ဂ်ကိုဖတ်ရတော့ သိပ်မယုံချင်ဘူး။ နည်းတွေစုံအောင်လုပ်ဖူးတယ်လေ။ ဒီလိုနည်းတွေနဲ့အဆီချတယ်ဆိုတာ အလွယ်လေးပဲ။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးကျ အစားလျှော့တာရပ်ပြီး ရလဒ်တွေစာရင်းလုပ်ထားတယ်။ ဒီနည်းကို စမ်းကြည့်ရမလား။ အရှုံးတော့မရှိဘူးလေ။
ရတနာ မိုက်တယ်။ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။
ဒီဘလော့ဂ်ကို အမှတ်မထင်တွေ့လိုက်တော့ တစ်ခုတော့ဝင်ပြောလိုက်ဦးမယ်။ ရတနာ တကယ်ကိုလှတယ်။ တစ်ခုလောက်မေးချင်တယ်။ ဒါက ဟော်မုန်းကို တကယ်သက်ရောက်မှုရှိတာလား။
ကျေးဇူးပါ ရတနာ။ ဝယ်ဖြစ်အောင်ဝယ်မှာပါ။ ကမ်းခြေပါတီလား။ အလန်းစားဘော်ဒီရှိတ်ရရင် လာဂျွိုင်းမှာ။
ကျွန်မလည်း မေးခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖြေကို အင်တာနက်ကနေ တွေ့ပြီးပြီ EcoSlim က အားနည်းနေတဲ့ဟော်မုန်းတွေကိုမြှင့်တင်ပေးပြီး ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို ကောင်းစေတယ်။ စားချင်စိတ်ကိုလျှော့ပေးတယ်။ လူကိုမထိခိုက်ဘူး။ စိတ်ဖိစီးတာတွေမဖြစ်ဘူး။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ သူ့ကို တရားဝင်ဝဘ်ဆိုက်ကနေပဲ တိုက်ရိုက်မှာရမယ်။ အတုတွေအများကြီးရှိနေလို့ပဲ။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို တခြားကမှာလိုက်တာ အတုကြီး၇လိုက်တယ်။ ကျွန်မသောက်နေတာ ၁လခွဲရှိပြီ။
တော်တော်လှသွားတာပဲ။ အရင်ကထက်ပိုလှတယ်။ ဝတာက ရုပ်ရင့်တယ်နော်။ အဆီပိုတွေမရှိတော့ရင် မိန်းကလေးတွေပိုလှလာတယ်။ ရှင့်အတွက် သိပ်ဝမ်းသာတာပဲ။ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ဒီနေ့ က EcoSlim စသောက်တဲ့နေ့။ အခု နေရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ မကြာခင် ကျင့်သားရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
မမတို့…ကျွန်မဗိုက်ပူပူလေးကိုလည်း ဒီလိုချလို့ရမလား။ ဗိုက်ထွက်နေတာ တော်တော်စိတ်ညစ်နေပြီ။ ဒီလိုပုံလေးမြန်ုမြန်ဖြစ်ဖို့ လိုပြီ။
ဟုတ်ပြီ EcoSlim အကြောင်း ကြားဖူးတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ ဆရာဝန်အညွှန်းလိုမယ်ထင်လို့။ တရားဝင်ဖြန့်တဲ့သူရှိတယ်။ သောက်ကြည့်သင့်တယ်။
ကျွန်မတော့ ကလေးမွေးပြီးနောက်ပိုင်း ဗိုက်ပြန်မချပ်တော့တာ။ ရတနာရယ် ရှင်ကျတော့ အသားလေးကြည်ပြီး ကျန်းမာလိုက်တာ။ EcoSlim အကူအညီနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ၄ ပတ်အတွင်း ကျွန်မဝိတ်ကျသွားတယ်။ အခုဆို ကိုယ့်ကိုယ်လုံးကြောင့် မရှက်ရတော့ဘူး။
အမှန်ပြောရရင် သိပ်တော့မယုံဘူး။ အကောင်းဆုံးက အိပ်ရာထဲကထွက်ပြီး အားကစားသွားလုပ်ပါ။ အထူးအဆန်းတွေနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်နေတာထက် အများကြီးပိုကောင်းတယ်။
လူတိုင်းတော့ အားကစားခန်းမသွားနိုင်ဘူးလေ။ ဘာလို့ဒိလိုလာပြောတာလဲ။
ဘယ်ကဝယ်တာလဲ။ဘယ်လောက်လဲ။ ပြောပြပေးပါ။ ခရီးမသွားခင် ဝိတ်ချချင်လို့။
အခုလိုပြောပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရတနာ ရှင့်ရဲ့ရလဒ်က အဆီချဖို့ ကျွန်မကိုတွန်းအားပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။ အရင်ကိုယ်လုံးလေးပြန်ရဖို့ ကြိုးစားနေတာကြာပြီ။ တစ်လမှာ ၃ ကီလိုပဲကျတယ်။ ကို.ယ့်ရလဒ်ကိုအားမရလို့ ဆက်လုပ်ဖို့အားမရှိတာ။ ရှင့်နည်းကိုသုံးကြည့်ဦးမယ်။ EcoSlim ကို အကြာကြီးဆက်တိုက် သောက်လို့ရတယ်မလား။
စပယ်ရေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အနေအထားမရောက်မချင်း တစ်နှစ်လုံးသောက်လို့ရပါတယ်။ ဆက်ပြီးသောက်လို့ရတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အချိန်ရပ်လိုက်ပေါ့။ သတိပေးချက်တွေ၊ မတည့်တာတွေမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် တန်ဆေးလွန်ဘေးပေါ့။ ပိန်ဆေးတွေက စားချင်စိတ်ကိုလျော့စေပြီးခံတွင်းပျက်တာတော့ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
ရတနာ လှလိုက်တာ။ EcoSlim အကြောင်း ကြားဖူးတာကြာပြီ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေက မသိကြတော့ ကိုယ်လည်းငွေမဖြုန်းချင်တာ့တာ။ အခုတော့ယုံကြည်ချက်ရှိသွားပြီ။ ၇ှင့်ကိုအားကျတာကိုး။
တို့လည်း ဒိလိုပဲ။ဘာစားရမလဲ၊ ဘာမစားရဘူးလဲ ရွေးနေရတာ။ ဘာတွေစားတာကောင်းမလဲ။ အဆီကျအောင်ဘာတွေစားသင့်လဲ မသိ။ နောက်ဆုံးတော့ EcoSlim မှာလိုက်တယ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းမရှိဘူးကိုး။ ဆေးစာလည်းမလို။ ကျွန်မယုံကြည်ရဆုံးပစ္စည်းပဲ။ ကျွန်မဝိတ်ကျသွားတာ တစ်နှစ်ရှိပြီ။ သူ့ကိုစသောက်တုန်းက နာမည်တောင် လူသိပ်မသိသေးဘူး။ ၂ လအတွင်း ၁၈ ကီလိုကျတယ်။ အဝတ်အစားတွေလုံးဝအကုန်ပြင်ပစ်ရတယ်။
အဆီကျမယ့်နည်းက ထိုင်ပြီးစား။ ကျချင်ကျမယ်။ မိန်းကလေးတွေက အရိုးခြောက်ဖြစ်နေရင်တောင် သိပ်ဝတယ်ထင်နေကြတယ်။
ဒီစကားပြောတဲ့သူကရူးနေတာ။ ၂ ပတ်အတွင်း ၁၀ ကီလိုကျတာ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ အစတော့ ကျွန်မလည်းမယုံဘူး ကိုယ်တိုင်မကြုံမချင်းပေါ့။